Mhoro shamwari. – Contos de Sacanagem
ආයුබෝවන් මිත්‍රවරුනි. →
COVID-19, iyo yakatukwa, inonamira, ine ngozi uye inouraya chipfuwo, inoda, kuti isu tirarame uye kwete kuti itibate, kuti tigare mukati memisha yedu kwenguva yakareba sezvatinogona uye kungosiya kana pasisina zvimwe sarudzo. Chete mukukosha, zvakanyanya zviitiko. Uye kuti kana tichidaro, tinozviita nekuchengeta kwese kunodiwa kuti tive nechokwadi chekuchengeteka, zvinoenderana nemazano ehutano Hutano, sekushandisa chaiko kwemask, hutsanana hwemaoko, kuwacha pamberi uye mushure mekudya nesipo kana sipo. Chiito chinofanira kusanganisira minwe, zvanza uye kumashure kwemaoko kune mawoko. Ita maitiro akafanana usati uye mushure mekushandisa zvifambiso zvevoruzhinji uye maelevhi uye kana patinosangana nevanhu kana zvinhu, kunze kwemisha yedu. Kana iwe usina mukana kune chimbuzi, kuva nedoro gel nguva dzose kunoita kuti zvive nyore. Paunenge uchikosora nekuhotsira, shandisa zvinyama kudzivirira kuti secretions ibviswe mumhepo. Uyezve, dzivisa kukwazisana nemaoko nekurumbidza kumeso. Dzivisa kubata maziso ako, mhuno nemuromo pasina maoko ako akachena.
Ndinoziva kuti hazvisi nyore zvachose, kunyanya kune avo, seni, vari chikamu chevanodaidzwa kuti “Mapoka eRisk”, vanogara pamudyandigere pamba, vachizadzisa kugara kwavo vega, kure nevanozivana, shamwari nehama. Zvisinei, kure nevaya vatinoda kuve pamwe navo. Chinhu chakanakisa, saka, ndechekuti isu tizvirambe tichishingaira, tichiita uye kuti tinochengetedza hutano hwedu hwepanyama uye hwepfungwa. Saka kuti tirege kuora moyo uye / kana kupenga. Ndinoverenga, kunyora, kuona TV, kuteerera mimhanzi, kuwana pasocial network, kufona, sezvingaite munhu wese. Asi ini ndoda kuita zvimwe. Uye ndinoedza. Kukupa iwe kambani yangu kuburikidza nemawebhusaiti angu uye mabhuku, anowanikwa pa:
Iwo mabhuku TRAVESSIA, DELAS, DELES uye OPERAÇÃO MUTUM, ane echirungu vhezheni CROSSIN, KUBVA KWAVO, VAVO uye OPERATION MUTUM, akaburitswa nekuparadzirwa neAmazon, anowanikwa mue-bhuku uye Hardcover zvinyorwa, zvekutenga kana kuverenga kwemahara kuburikidza neMhando. risingagumi mu:
https://www.amazon.com.br/s?k=Jos%C3%A9+Araujo+de+Souza&i=stripbooks&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref = Nb_sb_kusaziva
Ini ndinosiya yangu yehama uye ine rudo kumbundirana kune mumwe nemumwe wenyu, ndichikumbira iwe, mudiwa, kuti urambe uchichenjerera. Iyo mhuka inouraya!
José Araujo (Souza)